Page 303 – Baganthar
မိမိနေအိမ်အတွင်း စိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးနေတဲ့ ပုရွက်ဆိတ်တွေကို နှိမ်နင်းနည်းများ
Bagan Thar Jan 22
မိမိနေအိမ်အတွင်း စိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးနေတဲ့ ပုရွက်ဆိတ်တွေကို နှိမ်နင်းနည်းများ မိမိနေအိမ်အတွင်း ပုရွက်ဆိတ်တွေ အရမ်းသောင်းကျန်းလာလို့ နှိမ်နှင်းဖို့ လုပ်တဲ့အခါ စိတ်ညစ်ခေါင်း အစားရဆုံး အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ပုရွက်ဆိတ်တွေကို မောင်းထုတ်ပေးမယ့် နည်းလမ်းတချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ နှစ်ဖက်သုံးတိပ်ကြိုး သင့်မီးဖိုချောင်အတွင်း ပုရွက်ဆိတ်တွေစီးနင်းဝင်လာပါက နှစ်ဖက်လုံးကပ်နိုင်တဲ့ တိပ်ကြိုးနဲ့ ဟန့်တားနိုင်ပါတယ်။ ပုရွက်ဆိတ်တွေရဲ့ လမ်းကြောင်းနဲ့ လှုပ်ရှားသွားလာရာ နေရာကို တွေ့အောင်ရှာပြီး ပုရွက်ဆိတ်တွေ ကျော်မတက်နိုင်တဲ့ အဲဒီတိပ်ကြိုးဖြင့် ဝန်းရံပေးရပါမယ်။ ၂။ ဘောရစ်ခ် ...
ကိုယ့်သားသမီး ၁၀တန်းဖြေပြီးကျတဲ့သူဘဲဖြစ်ဖြစ် အောင်တဲ့သူဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘာသင်တန်းတက်ခိုင်းရမလဲဆိုတာဝေ ခွဲမရဖြစ်နေရင် အကြံတစ်ခုပေးပါရစေ။ မကွေးမြို့နဲ့ ၁၀မိုင်လောက်ဘဲဝေးတဲ့ မကွေး-တောင်တွင်းလမ်းနဲ့ ၃မိုင်ကျော်ကျော်လောက်ဘဲဝေးတဲ့ မယ်လှတောင်ရွာအဝင်လမ်းအတိုင်းသွားလို့ရှိရင် အစိုးရမော်တော်ယာဉ်သင်တန်းကျောင်းကိုရောက်ပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့ ကိုးရီးယားပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး မော်တော်ယာဉ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာများ ဝါယာရိန်းပြုပြင်တပ်ဆင်ခြင်းများ တွင်ခုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာများကို စာတွေ့ရောလက်တွေပါ ကွန်ပြူတာများနှင့်ပါမကျန် သင်ကြားပေးနေပါတယ်။ အသုံးပြုသင်ကြားပေးတဲ့စက်ကိရိယာတွေဟာနိုင်ငံတကာအဆင့်မှီတွေချည်းပါ။ တော်တော်လေးအားရကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်။ မိန်းခလေးတွေပါသင်ကြားလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ နေစရာအဆောင်များလည်းသီးသန့်ရှိပါတယ်။ သင်တန်းကြေးတလ စရိတ်ငြိမ်း၂၅၀၀၀ဖြစ်ပြီး စာသင်နှစ်အတိုင်း တနှစ်သင်ကြားပေးပါတယ်။ သင်တန်းပြီးဆုံးရင်လဲအလုပ်အကိုင်ပါရှာဖွေပေးနေတဲ့သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိဘများလေ့လာပြီးကိုယ့် သားသမီးတွေ ရဲ့ဘဝရှေ့ရေးအတွက် တင်ခိုင်းစေသင့်တဲ့သင်တန်းတစ်ခုပါ။ ဆက်သွယ်ရန်- ...
လူသူမရောက်တဲ့ ကျွန်းလေးပေါ်မှာ ကမ္ဘာဦးလူသားတို့ရဲ့ နေထိုင်ပုံနဲ့ တစ်ဦးထဲ နေထိုင်နေတဲ့ အဖိုးအို သာယာလှပတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ လူရဲ့စိတ်ကို ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပေးပါတယ်။ လက်ဆက်တဲ့လေ၊ အေးမြတဲ့ တောရိပ်တောင်ရိပ်၊ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်က ဆူညံညည်းတွားစရာတွေ ကင်းမဲ့တဲ့ဇုန်ဟာ အနေကြာသွားတဲ့ သူတစ်ယောက်ကို စွဲလန်းနှစ်ခြိုက်စေပါတယ်။ ခေတ်သစ် ရော်ဘင်ဆင်ရူးဆိုးလို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ခြင်း ခံထားရတဲ့ အဖိုးအိုကြီးတစ်ယောက်ကလည်း အခုဆို လူသူကင်းမဲ့ တဲ့ ကမ်းလွန်ကျွန်းလေးပေါ်မှာ ပျော်မွေ့နေတာ အနှစ် 20 ကျော်သွားပါပြီ။ အဖိုးရဲ့ ...
ဘုန်းတော်ကြီး မြတ်စွာဘုရားဟာ ဘာကြောင့် ဆံတော် မပါယ်ခဲ့ပါသလဲ?
ဘုန်းတော်ကြီး မြတ်စွာဘုရားဟာ ဘာကြောင့် ဆံတော် မပါယ်ခဲ့ပါသလဲ? ဒီမေးခွန်းကို စတင်မေးခဲ့သူက ဘာသာခြားတစ်ယောက်။ ကြက်သေသေပြီး ဆွံအခဲ့သူက ကျွန်တော်နဲ့သူငယ်ချင်းတွေ။ သူကမေးတယ်… “ဘုရားရှင်က ချစ်သားရဟန်းတွေကျတော့ ဦးပြည်းခေါင်းတုံးနဲ့။ သူကိုယ်တိုင်ကျတော့ ဆံတော်အရှည်နဲ့ကျတော့ သိပ်နည်းလမ်းမကျဘူး မဟုတ်လား။ စော်ကားချင်လို့မေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကြိုပြီးတောင်းပန်တာပါ။ သိချင်လို့ပါ။ တကယ်လို့တပည့်ရဟန်းတွေကို ဦးပြည်းခေါင်းတုံးနဲ့ဆိုရင် သူလည်း ဦးပြည်းခေါင်းတုံးဖြစ်သင့်တယ်မဟုတ်လား။ ဒါမှနည်းလမ်းကျမှာပေါ့””….တဲ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ပါလို့ ရဲရဲကြီးကြွေးကြော်တဲ့ ကျွန်တော် အရှက်ရပြီ။ ကိုယ်လည်း တစ်ခါမှ ဒီလောက် ...
မကျွတ်လွတ်သေးတဲ့ သမ္မတဟောင်းတွေရဲ့ ဝိညာဉ်များနဲ့ အိမ်ဖြူတော်
မကျွတ်လွတ်သေးတဲ့ သမ္မတဟောင်းတွေရဲ့ ဝိညာဉ်များနဲ့ အိမ်ဖြူတော် အိမ်ဖြူတော်ဟာ အမေရိကန်သမ္မတနဲ့ သမ္မတကတော်တို့ နေထိုင်တဲ့ စံအိမ်အဖြစ် ၁၈၀၀ ပြည့်ခုနှစ်လောက် ကတည်းက စတင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်သူမှန်းမသိတဲ့ ခြေသံတွေ၊ တံခါးခေါက်သံတွေ၊ တံခါးကို ထုရိုက်သံတွေ၊ ခွေးဟောင်သံတွေ နဲ့ ရုတ်တရက် ချမ်းစိမ့်စိမ့်ဖြစ်လာတဲ့ ခံစားမှု တွေကို အိမ်ဖြူတော်မှာ နေထိုင်တာဝန်ကျဖူးတဲ့ လူတိုင်း ခံစားခဲ့ဖူးတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ တခါတလေမှာ အိမ်ဖြူတော်ထဲမှာ လှည့်လည်သွားလာနေတဲ့ အဖြူရောင်အရိပ်သဏ္ဍာန်တွေ တွေ ...
ဆာမူရိုင်းတို့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ
ဆာမူရိုင်းတို့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ ရေးသားသူ – ကိုဇော်မင်း သမိုင်းမှတ်တမ်းများအရ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို စတင်ခဲ့တဲ့ မီဂျီခေတ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံက မင်းတုန်းမင်း ခေတ်နဲ့ ခေတ်ပြိုင်တွေလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ အဲသည့်နောက်ပိုင်း နှစ်များမှာတော့ ဂျပန်နိုင်ငံဟာ အမေရိကန်တွေရဲ့ အကူအညီကြောင့် အာရှတိုက်မှာ ပထမဆုံး စက်မှုထွန်းကားပြီး တိုးတက်ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံတခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တဲ့ အဓိက အကြောင်းကတော့ ဂျပန်တွေရဲ့ ဆာမူရိုင်း စိတ်ဓာတ်ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ...
မင်းဒင်ရဲ့ သက်ခိုင် အပိုင်း (၆၇) – မိန်းမဆိုးအမုန်း
မင်းဒင်ရဲ့ သက်ခိုင် အပိုင်း (၆၇) – မိန်းမဆိုးအမုန်း ရေးသားသူ – မင်းဒင် နံနက်ကိုးနာရီခန့် ရှိပြီ ဖြစ်သော်လည်း နှင်းမကွဲသေးချေ။ ကိုသက်ခိုင်ကို သူ့တဲပေါ်မှာ မတွေ့ရ။ ဖိုကြီးက ကိုအောင်ကြည်ကို မေးမိတော့အိပ်ဆောင်ဖွင့်၊ အလုပ်ဘုတ်ထုတ်ပြီးချိန် (၇)နာရီခန့်ကတည်းက စခန်းနှင့် တမိုင်ခန့် အကွာတွင်ရှိသော အပျိုကြီး ကြည်ကြည်ဌေး၏ ဈေးဆိုင်ဘက်သို့ ထွက်သွားသည်ဆို၏။ ဖိုကြီးနောက်က ချောင်းကလေးဘေးမှာ မတ်တတ်ရပ်နေရင်း အပျိုကြီး ကြည်ကြည်ဌေးတို့ ဆိုင်ရှိရာ ကွင်းပြင်ကြီး ...
ဂေါ်ရင်ဂျီကျွန်းကို မသွားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၆) ချက် ဂေါ်ရင်ဂျီကျွန်းကို မသွားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း ၅ ချက် အကြောင်း မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ခရီးလမ်းကြမ်းတယ်။ ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ ဒီခရီးဟာ ရန်ကုန်နေပြည်တော် အမြန်လမ်းလို ချောမွေ့နေတဲ့လမ်း မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိစေချင် ပါတယ်။ ညသွားပြီးမနက်မှရောက်တာမို့ ခရီးဝေးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ လမ်းမှာ အကွေ့ အကောက် အနိမ့်အမြင့်တွေကို ကျော်ဖြတ် ရမှာမို့ ကားမူးတာတွေ၊ တစ်ကိုယ်လုံးကိုက်ခဲတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ။ (၂) နေစရာမရှိဘူး။ ...
အသတ်ခံရပြီး သေမှာကို ကြိုတင်သိခဲ့တဲ့ သမ္မတကြီး လင်ကွန်းရဲ့ အိပ်မက်ဆန်း
Bagan Thar Jan 21
အသတ်ခံရပြီးသေမှာကို ကြိုတင်သိခဲ့တဲ့ သမ္မတကြီး လင်ကွန်းရဲ့ အိပ်မက်ဆန်း အမေရိကန် သမ္မတများထဲမှာ သမ္မတလင်ကွန်းဟာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အရင်းနှီးဆုံးဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ အမေရိကန် သမ္မတတွေထဲက အထူးချွန်ဆုံးသမ္မထဲမှာပါဝင်ပြီး သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်များ ၊ ရိုးသားမှုများကို ယနေ့တိုင် ပြောနေကြရ တုန်းပါ။ အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကို အဆုံးသတ်ပေးသူ ၊ ပြည်ထောင်စု နှစ်ခြမ်းမကွဲအောင်ဆောင်ရွက်သူ၊ ကျွန်စနစ်ကို ဖျက်သိမ်းပေးသူ စတဲ့ပြောမကုန်တဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေနဲ့ ပြည့်နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ မည်မျှပင် ထူးချွန်ထက်မြက်သူဖြစ်သော်လည်း မကြိုက်တဲ့သူကတော့ အနည်းနဲ့အများရှိဆဲပင်။ သမ္မတကြီးလင်ကွန်းဟာ ...
အိမ်တစ်အိမ်၏ ‘လာဘ်ပိတ်စေသော အကျင့်ဆိုးများ’
အစဉ်ရှောင်ကြဉ် ကြရမည့် ဘုန်းကံနိမ့်စေ လာဘ်ပိတ်စေသော အလေ့ဆိုးများ ၁။ ဘုရားခန်းတွင် လင်မယား (၂)ယောက် မအိပ်ရ။ ၂။ ယောကျာ်း၏ ညာဘက်တွင် မိန်းမ မအိပ်ရ။ ၃။ နံနက် (၄) နာရီခွဲမှ (၆) နာရီအတွင်းတွင် သာသနာစောင့် နတ်မင်းကြီး (၄) ပါးတို့သည် လူအများစု၏ ကောင်းမှု့ ၊ မကောင်းမှု့တို့ကို ကြည့်ရူသော အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ထိုအခ်ျိန်တွင် မေထုန်မှီဝဲမှု့ကို အထူးရှောင်ကြဉ်ရမည်။ ၄။ မိမိအိပ်စက်သော ...